Atody sy tain-kafe, manarina hoditra reraka
Ny hodi-tava no anisan’ny mora ahitana indrindra ny harerahana. Mahatonga ny hoditra ho antitra vetivety izany satria sady mikentrona no somary miroraka ny hoditra.
Ity paipaika atoro anao androany ity dia sady mety ho an’ny olona reraka no azo ikojakojana ny tarehin’ireo efa nahazoazo taona ihany koa.
· Zarahana amin’ny tapotsiny ny tamenak’atody, ka ny tapotsiny no ampiasaina, atambatra amin’ny tain-kafe kely
· Ampiana tantely ireo ary afangaro tsara
· Ahosotra amin’ny tarehy ary aza adino ny tenda. Atao matevintevina rehefa manosotra azy
· Avela hiasa mandritra ny 10 mn eo amin’ny tarehy izay vao kobanina amin’ny rano matimaty.
· Farano amin’ny fanosorana ny akora manamandina endrika fampiasanao isan’andro.